SAWIRO: ‘Xaaskeygu kuma dhacdo in dadka dhexdiisa ay iigu yeerto magaceyga saxda ah’.. | Allbanaadir News	SAWIRO: ‘Xaaskeygu kuma dhacdo in dadka dhexdiisa ay iigu yeerto magaceyga saxda ah’..
Waxase ku adag in ay magacaaga ku dhawaaqdo si ay kuu soo jeediso sababtu waxa weeye haddii ay kuu dhawaaqdo waxa argagaxaya oo kala yaacaya dadka goobta jooga. Ciidamada nabad gelyaduna adoon is ogayn ayay isku kaa gedaami.
Qofkaagii muwaadinka daacadda ah ee sharciga dhawrayey ayaa lagu gayn qol yar oo gaar ah oo saacado dheer su’aalo lagugu waydiin.
“Waxaan markaasi ka soo qalin jebiyay jaamacadda, waxaana muddo sannad ah ay u dhaxeysay markii aan galayay machadka iyo kan tababarka dhakhtarnimo. Waxaan xilligii fasaxa ku qaatay in aan caawiyo carruurta deegaanada aan aadka loo daryeelin.
Marka aan halkaa imid ayaan magaceyga u sheegay carruurtii halkaa ku jirtay. Waa ay yaabeen balse waxaan is iri, haddii cannug siddeed jir ah uu magaciisa sheegi karo, adiga maxaa kuu diidaya.’”